China 304DQ DDQ inotonhora yakatenderera simbi isina simbi coil Kugadzira uye Fekitori Huaxiao
Sino Stainless Simbi Kugona nezve 304 DQDDQ inotonhora yakakungurudzwa simbi isina simbi coil, 304 DQ DDQ CRC
304 DQ DDQ Same giredhi kubva kune akasiyana nyika muyero
304DQ DDQ Chemical chikamu ASTM A240:
C: .00.08, Si: ≤0.75 Mn ：.02.0 ，Cr ：18.0～20.0 ，Ni ：8.0～10.5，　S ：.00.03 ，P ：.00.045 N0.1
Kuwedzera (%):> 53%
Tsananguro nezve DQ, DDQ uye zvakajairika zvinhu
SUS304DDQ zvinhu zvinonyanya kushandiswa kune aya epamusoro ekugadzirisa huwandu hwechigadzirwa, hongu, chiyero chekugadzirisa chinopfuura zvigadzirwa zve2.0 kazhinji zvinofanirwa kupfuura mashoma ekupedza kutambanudza. Kana iyo yekuwedzera mbichana isinga svikike, chigadzirwa chinogona nyore kuburitsa kutsemuka uye kudhonza-mukati kana uchigadzirisa zvakadzama-dhizaini zvigadzirwa, zvichikanganisa iwo muyero weyunifomu yezvakapedzwa zvigadzirwa, uyezve ichiwedzera mutengo wevagadziri.
General zvinhu: Inonyanya kushandiswa kune zvimwe zvinhu kunze kweDDQ kunyorera. Ichi chinyorwa chinozivikanwa nehuremu hwakareba.≧45%), yakaoma kuomarara (≦180HB), uye yemukati tsanga saizi giredhi ye8.0 ~ 9.0. Inofananidzwa neDDQ zvinhu, yakadzikakudhirowa kuita kuri murombo. Inonyanya kushandiswa kune zvigadzirwa zvinogona kuwanikwa pasina kutambanudza, semapuni, zvipunu, maforogo, midziyo yemagetsi, uye pombi dzesimbi dzerudzi rwembatya. Zvisinei, ine mukana pamusoro pezvinhu zveDDQ mune izvo BQ zvivakwa zviri nani, kunyanya nekuda kwekuoma kwayo kwakati kwirei.
Pashure: 316L 316 inotonhora yakakungurudzwa simbi isina simbi coil
Zvadaro: 316Ti inotonhora yakakungurudzwa simbi isina simbi coil